Mihena ny ranon’Andraikiba Mananontanona ny fahirano ao Antsirabe
Efa mananontanona ao Antsirabe ihany koa ny olana amin’ny rano. Efa misy fikorontanana mantsy ny famatsiana rano ao an-tanànan’Antsirabe mandritra ny tontolo andro amina faritra maromaro noho ny fihenan’ny ranon’Andraikiba,
izay sambany tato anatin’ny taona vitsivitsy no nihenabe toy izao. Raha ny fanazavana azo dia noho ny fahatongavan’ny main-tany dia misy fihenana ny farihin’Andraikiba, ary ny loharano eny Marofangady izay toerana misy ireo toby roa famokaran-dranon’ny JIRAMA Antsirabe, eo ihany koa ny fitomboan’ny filàn’ireo mpanjifa manana fandaniana lehibe noho izany dia tsy maharaka ny rano vokarin’ny JIRAMA na dia efa misy ny ezaka ho fampitomboana ny famokaran-drano. Miverina tsikelikely amin’ny laoniny ny famatsiana rano amin’ny alina koa entanina isika mpanjifa hanangona rano ary mba hanao fitsitsiana, indrindra ireo izay manana fandaniana be ho fitsinjovana ny hafa. Ny Jirama moa dia efa naneho ny fialan-tsiny amin’ny fanelingelenana mety aterak’izany ary misaotra antsika amin’ny faharetana.